တပ်မတော်နဲ့ RCSS က နိုဝင်ဘာ ၂၉ မှာ တိုက်ပွဲမဖြစ်ဟု ပြော၊ TNLA ကလည်း ငြင်းဆို
တပ်မတော်နဲ့ RCSS က နိုဝင်ဘာ ၂၉ မှာ တိုက်ပွဲမဖြစ်ဟု...
30 พ.ย. 2562 - 15:46 น.
နိုဝင်ဘာ ၂၉ မှာ တိုက်ပွဲမဖြစ်ဟု TNLA ကလည်း ငြင်းဆို
နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက် နံနက်ပိုင်းမှာ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ္မတူမြို့အနီး၊ မန်ဝါကျေးရွာထဲက ပြောင်းဖူးခင်းထဲ လက်နက်ကြီးကျည်ကျလို့ ပြောင်းချိုးနေတဲ့ တောင်သူအမျိုးသမီး၅ ဦးအနက် ၃ ဦး ဒဏ်ရာရပြီး တစ်ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ဒေသခံတွေက တပ်နဲ့ RCSS နဲ့ တိုက်ပွဲကြား ထိခိုက်တာလို့ ပြောသလို တချို့ကလည်း တပ်မတော်၊ RCSS နဲ့ TNLA သုံးပွင့်ဆိုင်ဖြစ်ကြတာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တပ်မတော်နဲ့ ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကတော့ အဲဒီနေ့မှာ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘူးလို့ ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
အဲဒီလိုပဲ တအာန်းအဖွဲ့ TNLA ကလည်း နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်မှာ သူတို့တပ်တွေ အဲဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နားမှာ မရှိကြောင်းနဲ့ တပ်မတော်က ခလရ (၃၄၄) ကနေ လက်နက်ကြီးနဲ့ မန်ဝါရွာကိုလှမ်းပစ်လို့ လူနေအိမ်တွေထိပြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံးရတယ်လို့ အဲဒီအဖွဲ့က ဗိုလ်မှူး မိုင်းအိုက်ကျော်က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုး RCSS နဲ့ တပ်မတော် နမ္မတူအနီးမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံး
တိုက်ပွဲကြောင့် ကျန်ခဲ့တဲ့ လက်နက်တွေကို တပ်က ဖမ်းမိတာလို့ TNLA ပြော
နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့က ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ္မတူမှာ တပ်မတော်နဲ့ တအာန်းအဖွဲ့ TNLA တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာက လက်နက်ကြီးကျည် ကျလို့ ပြောင်းခင်းထဲမှာ ပြောင်းချိုးနေတဲ့တောင်သူအမျိုးသမီး ငါးဦးအနက် တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူး ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ဘီဘီစီကို နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်မှာ ပြောပါတယ်။
"မန်စံရွာရဲ့မြောက်ဘက်မှာ TNLA အင်အား၂၀ လောက်နဲ့ တွေ့ဆုံတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ သူတို့ကတော့ အရှေ့ဘက်ကို ဆုတ်ခွာသွားတယ်။ သူတို့နေတဲ့နေရာကို သိမ်းဆည်းရမိတာရှိတယ်။ နမ္မတူမြို့ရဲ့ မန်ဝါအပေါ်ကျေးရွာမှာ ပြောင်းဖူးချိုးနေတဲ့အမျိုးသမီး ငါးယောက်အနက်မှာ သုံးယောက်ဒဏ်ရာရတယ်။ မမောက်ဆွဲရယ်၊ မအို့အိမ်း ရယ်၊ မနန်းစံရယ် ဒဏ်ရာရတယ်။ အဲဒီထဲက မမောက်ဆွဲကတော့ ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်" လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ လက်နက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ချိန်မှာ တပ်မတော်ကလည်း TNLA ကြောင့် လို့ ပြောမှာဖြစ်သလို TNLA ကလည်း တပ်မတော်ကြောင့်လို့ ပြောမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကိစ္စတွေက ပြောရတာ ခက်တယ်လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
အခုလို နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်း အရပ်သားတွေ ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့ လက်နက်ကိုင်တွေအနေနနဲ့ ရွာအနီးကနေ ချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်တာ၊ မိုင်းထောင်တာတွေမလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
အဲဒီလိုလုပ်နေရင် ဒေသခံပြည်သူလူထုပဲနစ်နာတယ်လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်ကလည်း အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS/SSA)နဲ့ နမ္မတူမြို့နယ်၊ မန်ဝါရွာအနီးမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ နှစ်ဖက်အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နမ္မတူ၊ မန်ဝါရွာအနီးမှာ လက်နက်ကြီးကျလို့ အရပ်သားအမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်မှာ သူတို့နဲ့ အစိုးရတပ်နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘူးလို့ RCSS က ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းဦးက ပြောပါတယ်။
"နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်မှာ မန်ဝါရွာနားမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်တာ မှန်ပါတယ်။ ဒါကလည်း နှစ်ဖက်တပ်တွေ သွားလာ ရင်း မတော်တဆ ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာပါ။ ဆယ်မိနစ် ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ပဲ အပြန်အလှန် ပစ်တာပါ။ လူသေတယ်ဆိုတဲ့ ၂၉ ရက်မှာ ကျွန်တော်တို့တပ်တွေ အဲဒီရွာနားမှာ မရှိပါဘူး" လို့ သူကပြောပါတယ်။
တပ်မတော်ကလည်း နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်မှာ RCSS နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိခဲ့ဘဲ TNLA နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဲဒီတိုက်ပွဲနဲ့ အရပ်သားအမျိုးသမီးတွေ သေဆုံးဒဏ်ရာရတာကို သတင်းထုတ်ပြန်သွားဖို့ လုပ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့မနေ့က နမ္မတူအနီးမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲဟာ တပ်မတော်နဲ့ RCSS တို့ ဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောနေပါတယ်။။
ဒေသခံတွေဘက်ကတော့ အခုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေဟာ တပ်မတော်၊ RCSS နဲ့ TNLA သုံးဖွဲ့လုံး သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ထားတာ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့က ကျောက်မဲနမ့်ဆမ်ဘက်မှာပဲ။ မနေ့ကတော့ တိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘူး။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ထိတွေ့တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူး။ အခု တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေ သွားလာလှုပ်ရှားတာတော့ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီတလောက ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေ အဲဒီဘက်မှာမရှိဘူး" လို့ ဗိုလ်မှူးမိုင်းအိုက်ကျော်ကပြောပါတယ်။
RCSS နဲ့ တပ် ဘာလို့တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်တာလဲ
အစိုးရတပ်နဲ့ အခုလို တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာဟာ နှစ်ဖက်လုံးက အပစ်ရပ်ချုပ် NCA ပါအချက်တွေကို မလိုက်နာ လို့ ဖြစ်တာလို့ ကRCSS က ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းဦးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
အဲဒီလိုပဲ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကလည်း အလားတူ သဘောထားမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။
"NCA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပါလာတဲ့ ကတိကဝတ်တွေကို စောင့်ထိန်းဖို့လိုတယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ နယ်မြေကျော်လွန်တာတွေ နယ်မြေတိုးချဲ့တာတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင် နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်း လျော့နည်းသွားမယ်။ RCSS နဲ့ဆို တိုက်ပွဲမဖြစ်တာကြာပါပြီ။အခုဖြစ်တာကလည်း ရှမ်းမြောက်မှာ နယ်မြေတိုးချဲ့တည်ဆောက်လာလို့ ဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်" လို့ ဆိုပါတယ်။
RCSS အနေနဲ့ ရှမ်းမြောက်မှာ တပ်က ပြောသလို တပ်စခန်းအခိုင်အမာ တည်ဆောက်တာမျိုး မလုပ်ဘူး လို့ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းဦးက ပြောပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ လာမယ့်နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
RCSS ဟာ အပစ်ရပ်စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နောက် တပ်မတော်နဲ့ တိုက်ပွဲ ၅၈ ကြိမ်ဖြစ်ပွားထားပြီး တိုက်ပွဲအဓိကဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းအရင်းထဲမှာ လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအတွက် နယ်မြေ အတည်တကျ သတ်မှတ်ထားမှုမရှိတဲ့အတွက် နှစ်ဖက်တပ်တွေ ထိတွေ့မှုက အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့လည်း တပ်မတော် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ထားပြီး ဒေသခံတွေ ထိုင်းဘက်ကို ထောင်နဲ့ချီတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။
RCSS ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ် နေပြည်တော်လာမယ့် လမ်းကြောင်းကို တပ်မတော်က တားမြစ်လို့ ခရီးစဉ်ပျက်သွားတဲ့အတွက် ဒီအပေါ်နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ပြေလည်ခဲ့တာ နှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာ ခုလို တိုက်ပွဲဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။
လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်ကနေ ၅ ရက်အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မှာ အပစ်ရပ်လက် မှတ်ထိုးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေစုဖွဲ့ထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST) အစည်းအဝေး ကျင်းပဖို့ရှိနေပြီး ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။
อัลบั้มภาพ တပ်မတော်နဲ့ RCSS က နိုဝင်ဘာ ၂၉ မှာ တိုက်ပွဲမဖြစ်ဟု ပြော၊ TNLA ကလည်း ငြင်းဆို